Akavaka kuzvikudza Pt. 1 — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akavaka kuzvikudza Pt. 1
Hapana anoda zita droppers. Munoziva ani ndiri kutaura pamusoro. vanhu vaya vanoda kuziva kuti vazive vanhu kuti ungangodaro uchida kuziva. Pandinofunga "namedropper,"Pane imwe Guy kuti pakarepo anouya mupfungwa. Handina chete akamuchingamidza tsama nguva, asi nguva dzose vatataura, hafu yedu kukurukura unobviswa chete nezita madonhwe nemaune.
Anoziva vanoverengeka "guru nguva" vanhu vakanaka, uye ane musoro anokwanisa vanoverevedza mazita avo munzvimbo chero kukurukura. Heuno muenzaniso. ndinoti, "Aaa murume, inguvai?"Mhinduro yake: "Oh, zviri pamusoro masikati. kunondiyeuchidza iyoyo Ndairidza putt putt pamwe Michael Jackson masikati kuParis. "Shoko?
chokwadi, zviri kwete zita droppers kuti irk isu zvazvo. Zvinoita vanhu pemapani vakawanda. Isu kuneta kunzwa akura varume Vanovhaira pamusoro kwavo chikoro nhabvu mazuva (inguva aenderere mberi, changamire). We kuneta shamwari dzedu ropafadzo kuti vawane nzira yakati tweet pamusoro kunzvimbo dzose zvekumwe vanoshanyira. Uye hatina mwoyo murefu zvikuru vanhu zvakadzama kwatiri ose chinhu chinodhura zvavanenge vatenga (kutoti vari rap, ehe saizvozvo). Kana zviri pakavanda kuzvikudza pamusoro ani munoziva, kana unashamedly Zvairatidza zvose pezvaunoita, kuzvikudza handiye inotonhora.
Zvichitaurwa zviri nyore, kuti vhaira ndiko kuti "kutaura uchitaura." Uye tose kunge mhosva izvozvo pane imwe nguva. Zvinogara chinokurwadzai ziso rwakapetwa apo vamwe kuzviita - saka nei vachiri tinotora chikamu mairi isu?
Kuzvitutumadza chinoitika kana uine chimwe chinhu (kana kuita chimwe chinhu) saka zvinoshamisa kuti unofunga wose anofanira kuziva nezvazvo. Uye kwete chete kuita vanofanira kuziva nezvazvo, vanofanira kuziva kuti zvikuru muri nokuva (kana kuita) naro. Kana tiri tizviongorore, isu zita donhwe uye anozvininipisa vhaira kushamwari dzedu nokuti tinofunga kuti kunotiita kutarisa zvakanaka. Uye ndizvo chaizvo nei zvakaipa.
Dambudziko harisi kuti zvauri kuzvikudza pamusoro hakusi kukuru. Zvingava. Zvinozonetsa kuti mugumo chinangwa hachisi zvikuru. Chinhu chaunoita nokuda kukudzwa chivi.
Rugwaro anotaura runako zvakasimba pamusoro vanotaura vachizvirumbidza mhando ichi. Mumwe muenzaniso uri 1 Corinthians 4:7, umo Pauro anobvunza, "Chii une chausina kugamuchira? Uye kana wanga kuzvigamuchira, nei uchizvirumbidza sokunge kuti haana?"Ari rinonyanya achiti, "Zvose zvaunazvo wakapiwa kwamuri. Saka nei imi pemapani kana mose kwaiva kugamuchira chipo?"
Mumwe okuzvikudza shoko isu kutaura ndiro bara kunangidzirwa zvakananga pane Musiki wedu. Zvose zvakanaka zvinobva kwaari, izvo zvinoreva hapana wedu anogona kutora chikwereti nokuti. All kubwinya Yose ndorwevaya Mwari, asi tiri kuramba ndichiedza kuita kuti vamwe pachedu. In rokudzidza nyika, kutora chikwereti nemumwe basa anonzi plagiarism. Munyika chaiyo, zviri kunzi kuzvitutumadza.
Zvakanaka zvatopera ipapo, rudyi? Never, nokusingaperi kUZVIKUDZA!
Handifungi kuti zvikuru kuti nyore. Kwete chete ita Ndinofunga unofanira angazvikudza dzimwe nguva, Ndinofunga kuti chii rawakasikwa kuita. Regai nditsanangure.
yeuka, Mudzi kuzvitutumadza ari kufunga chinhu zvaunazvo zvokuti zvinoshamisa kuti munhu wose anofanira kuziva nezvazvo. Vaya wabatwa vakadzikinurwa naJesu vane chimwe chinhu chokuzvikudza nacho - Mwari pachake. Kana tinoziva Mwari, isu icharidzwa tinofanira saka kure naye kuti tinonzwa tichida kuparidzira kunaka kwake vamwe (1 Pet. 2:9). Iye kukuru kuti tirambe tiri. Jeremiah 9:23-24 anogumisa zvakanaka.
"Ngaarege akachenjera kuzvikudza uchenjeri hwake
kana murume akasimba kuzvikudza kwesimba rake
kana mupfumi kuzvikudza kwepfuma yake,
asi ngaagare anozvirumbidza pamusoro ichi:
kuti anonzwisisa uye anoziva ini,
kuti ndini Jehovha, Anotenda mutsa,
kururamisira nokururama panyika,
nekuti izvi ndinofarira,"
ndizvo zvinotaura Jehovha.
Kana uchiziva Mwari, Ndinoda kuti uzvikudze. Asi kana muchidaro, usarega kuva dzako njere, kana dzako simba, kana dzako fuma. pachinzvimbo, kudada Yake. Ngaazvirumbidze muna chokuti unoziva Mumwe nouchenjeri hwakakwana, simba-simba rose, uye haana kugumira nefuma yenyasha. Pane kushandisa mashoko enyu kuwana yako mbiri, kuzvishandisa kushamisira Wake.
The Universe rakafanana kuratidzwa nyaya Mwari akudzwe. The Earth akasikwa kuratidza simba rake. Miti dzakaumbwa kuti vanoshandisa runako rwake. Animals vakanga akarigadzirira kuratidza ukuru hwake. Uye newe? Iwe vakavakwa kuzvikudza paari. Saka kana iwe Ichidonhera zita, ngazviitwe Wake.
Aaron mavhiki • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:09 pm • pindura
Ichi rwendo chaizvoizvo zvikuru, chengeta kukwira giya basa!
Erin • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:11 pm • pindura
ichi yakanyorwa zvakanaka. anoita zvikuru pfungwa. Ndinoda kureba uyewo. kukuru pamusoro vanoenda. havagoni kumirira kuverenga zvakawanda, rwendo.
Justin Humphrey • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:32 pm • pindura
Thanks Trip. Ichi zvechokwadi yakanaka pfungwa. kubudirira kwedu pachedu zvichienzaniswa haana kupedza nyasha dzaMwari maturo. Ngatitaurei kutanga kuzvikudza pamusoro Ishe wedu uye Muponesi!
Keli Sthran • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:35 pm • pindura
Izvi zvakanga zvakanaka Trip! The itsva Nzvimbo anotarira zvinoshamisa!
chuni • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 pm • pindura
Wow. simba. Tweet, mugove, Email!
Jay • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:14 pm • pindura
Ndine chinhu huru kugoverana nemi!! saka, I vanotevera izvi zviviri 18 gore VaKristu kare YouTube, Instagram&Twitter uye MWEDZI uye mazuva maviri apfuura, vakati kuti vakaudzwa naMwari kuti kusiya NC uye kuenda Los Angeles. Vakasvika zuro!!!! ANOPFUURA PART?!! Vakasiya NC ne gumi madhora, munhu musana rongedza uye kutenda kwavo uye akatanga KUFAMBA!!! Munziramo, vakapiwa bikes, ipapo chikafu, fukidza, Vatasvi &mari kuti vabatsire parwendo rwavo. Uye havana kunyange kurikumbira!!!!! Vanhu chete kukwira kwavari uye kupa. Kufanana vaikwanisa kuona mudzimu waMwari zvose pamusoro pavo!! Ivo akanyora vids parwendo YouTube ndokuisa mapikicha pamusoro Instagram uye tirambe pamusoro Twitter dzavo uyewo zvevakomana. YouTube wavo harina yoku- pavhiki asi vachiri zvinoshamisa zvenyu vaiita ipapo kubva rose rwendo ivo dzifambirane Twitter dzavo uye Instagram akapotsa RUGWARO. Just aida kuparadzira ichi newe here zvokuti vakaparadzira ichi nhau huru Faith. Pamwe unogona kunyange kuwana vaaisangana navo uye EDZA MWEYA HWAVO. Varume awa Legit. Amazing zvipupuriro. Anorega pakuparadzira mashoko akanaka!
dzavo YouTube: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe
dzavo Instagram: Livin4Christ4Lyfe
dzavo Twitter: Liv4Christ4Lyfe
Ngariropafadzwe mukoma!! Izvi zvakawedzera kutenda wangu tariro nayo anowedzera Iwewo!!
Ben Sudderth III • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:17 pm • pindura
Ndainakidzwa nokuverenga Blog renyu. Zvakanga dzinonakidza uye nyore kunzwisisa. Anoteerera kuita kwako kuita!
Nakidzwa Zvikomborero vaMwari
David Gaines • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:18 pm • pindura
Hongu sevana vaMwari tiri akavaka kuzvikudza pamusoro simba rake rinotyisa, rudo, tsitsi uye kunyanya nyasha dzake. Ishe anoti, Kana munhu anozvirumbidza nekumuita Anozvirumbidza muna Ishe. Shoko Swag rinoreva kuti kuzvirumbidza kana kuzvikudza inova nokuzvikudza chinhu kuita kana iwe kuti zvose pamusoro pako. Kana totaura swag, nyika anogadza mureza, vanoudza vanhu whats zvinenge kana chii akadzikama kana kwete. Kuva muKristu hakusi chinonyanya kufarirwa chinhu kuti munzanga mazuva ano, asi zvirokwazvo ndiro rinokosha. SomuKristu rakapedzeredzwa kuti tive swag, yakanakisisa swag, uye Ndiko mumwe Swagg Vakazvipira izvo kunongoreva kuzvirumbidza muna Jehovha Mwari. In kufamba kwedu, hurukuro yedu, uye kuburikidza nziyo dzedu tichizvikudza uye vhaira Ishe Jesu Kristu, nokuti tava zvibereko Grace Rake nemuchinjikwa uye ndiko kuti upenyu hwedu basa kukunda mamwe mweya kuburikidza nokuparidza Gospel kwenyasha.
Malemaadutse • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:24 pm • pindura
Tatenda kutuka mukoma-I'm nemhosva kuzvitutumadza. Achaita zviri nani mangwana.
Sarah • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:38 pm • pindura
Absolutely kubvumirana nemi! Handina kumbofunga yokuva “akavaka kuzvikudza” asi iwe zvechokwadi ndigutsikane. Ini kwazvo nokurava kunyora kwako. Kusimba anotokonya pfungwa asi mwero nokukurudzira. Perfect akavhenganiswa vaviri!! Thanks yekunyora.
Jay • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:08 pm • pindura
Amen. Izvi zvakanga papfungwa Tripp. Ndinokutendai nokuti kuva chikomborero. #SpiritLed #BragOnMyLord
KARLONBURKETT • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:31 pm • pindura
Ndinogona kudada Jehovha wangu?
KARLONBURKETT • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:32 pm • pindura
“Isu kuneta kunzwa akura varume Vanovhaira pamusoro kwavo chikoro nhabvu mazuva (inguva aenderere mberi, changamire).” #Preeeach!
KGRANT • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:00 pm • pindura
I mahwekwe ino uye mukomana, Ndinonzwa yakakurudzira. Saka zvikuru kufungisisa mashoko aya. Ndicho zvose sekurudziro uye vanofanira kuongorora pachake uye vavariro. Mbiri kuna Mwari kukupa chipo kunyora ichi!!!
Terrence • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 11:01 pm • pindura
Great Job Trip! Idai Audio Piece. Ndamboona kuti asati! Zvinondiyeuchidza nguva ini akaturikwa kunze… Kungotamba! Kukurudzira Great.
Langston • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 1:10 ndiri • pindura
Awesome romukova, rwendo! Ndinoda ichi. Very kukurudzirwa ikozvino. Ndinokutendai nokuti kuteerera uye tichibvumira Mwari vanotaura kuburikidza iwe!
India • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 1:35 ndiri • pindura
Nakisisa mugove Mr. rwendo!!! Saka simba uye anokurudzira!
James • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 4:34 ndiri • pindura
Zvikuru kuona Trip achiri kutaura chokwadi kunyange kana chiri unosvikirwa zvakasiyana pane mumhanzi. Kuti chaiva iverengwe kukuru, Ndinotarisira kunzwa zvakawanda nezvazvo. Mwari vakukomborere, rwendo.
Reggie • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 8:53 ndiri • pindura
Ndine zvimwe zvinhu kuti vachinje.
Aubrey • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:35 ndiri • pindura
Idai nyore mharidzo – runako
Mallory • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:38 ndiri • pindura
Unogona ndapota narrate zvose kubvira zvino?
broChris • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:40 ndiri • pindura
Great pfungwa wakatsamwiswa verenga Mr. rwendo. Vakawanda vanogona kutora izvi mwoyo, uye ikozvino kupinda tsika. Rambai kushandisa zvipo Mwari akupa, iyo zvino zvinosanganisira kuva munyori akanaka kwazvo, uye kuramba kugovana shoko vaya zvipo… zviri richisvika kupfuura iwe unenge anombofa. Mwari komborera, #JesusIsKing
Jose • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:44 ndiri • pindura
Billy • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:59 ndiri • pindura
nyaya Great. Izvi zvakapa vamwe kunzwisisa zvakadzama kuti ndakanga ndisina kukurukurwa asati. Ndiri kutarisira Part Two! aita zvakanaka.
PhillipHolyApostleMurphy • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 12:24 pm • pindura
mashoko Very zvakanaka… Blessed kunzwa Ishe wedu kutaura kuburikidza… Mwari wedu mukuru!!!! Mwari wedu wakanaka!!!! Iye unotyisa kwazvo!!!
okaro Rex • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 12:26 pm • pindura
A chidimbu chikuru. Regai kuzvikudza True kutanga.
ddau • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 2:53 pm • pindura
I anochera ichi.
Mareesa • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 2:58 pm • pindura
zvokudya zvikuru pfungwa :)
IsaacD • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 3:15 pm • pindura
Iri raiva nyaya huru, zvakanyorwa zvakanaka, uye ini chaizvo aida okuteerera zvinoriumba iwe pazviri. Ndinokutendai changamire yokuitawo ichi.
dombo shora • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 7:01 pm • pindura
Ndinowanzofunga izvi; vhaira. Ndicho zvakawanda zvakaita kuzvikudza tichengete pamusoro akanyevenutsa mwoyo yedu. Nokuda kwechikonzero achipa Mwari rukudzo pamberi vasiri vatendi Zvingava zvakaoma asi chete nokuda kwokuzvikudza.
Recently I scored yakakwirira chaizvo pandakaona kuzodzosera akatora ASVAB. Ndakafara zvikuru nokuti ndaiziva Mwari akanga akandibatsira kuzviita. nyasha dzake raiva chii akandipa kuti zvibodzwa uye zivo akaisa mandiri yakandibatsira kunzwisisa kwemasvomhu equations handina kugona kunzwisisa pamberi. Asi kana ndaisvika kuti chikwata changu ndakaudza vose chii Ndine nomufaro asi gare gare ndakanzwa mhosva nokuti Ndaiziva chete akaudza avo ndaiziva vaiva vatendi kuti aiva Mwari zvose. Vasingatendi Handina akaudza uchapupu hwangu.
Ndinoita ushumiri mujeri musi weSvondo uye Hazvitsananguriki nekuti kana ndiri pamberi pavo ndaigona hanya zvishoma kana ivo vanofunga ndiri mupengo zvino kana ndiri kubasa kashoma kuuya zita. Munhu wose anoziva Ndiri muKristu asi hapana kana zano sei Ndiye zvose zviri mupfungwa dzangu 24/7.
Ndinenge kushandira ichi. Thanks chokuita.
vachanamata • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 9:12 pm • pindura
U chete zvakachinja upenyu hwangu Trip. Ndinokukumbirai kugamuchira mwedzi simba nd it vison…. Maita U
Alejandro • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 9:36 pm • pindura
rwendo , Mwari Bless iwe murume !
Izvi zvaidiwa sechiyeuchidzo uye nokuda kuti Ndinokutendai, kubvumira Mwari kushandisa kuti vashumire. We vakashinga kuva chinhu chakanakisisa kuzvikudza pamusoro.
Tiffanie • Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 9:42 pm • pindura
Izvi zvakanga zvikuru! Thanks Trip. Ndinoda kuti wako achiri anodonha ruzivo pamusoro pedu nenzira pfupi nguva yakawanda :)
BrantPhelps • Nyamavhuvhu 21, 2013 pa 10:17 pm • pindura
Ndizvo zvinhu zvakanaka, rwendo… Zvose zvatiinazvo wakapiwa kwatiri Musiki Mutsindo uye Awesome Mwari uyo zviripo kuzvikudza pamusoro!
Isaac • Nyamavhuvhu 22, 2013 pa 10:04 ndiri • pindura
Ndiri saka vakashamiswa nzira imi Inter-vakarondedzera akwegura uye itsva testatment kutibatsira kunzwisisa zvakaipira braging kuzvivimba!! Uyu kufemera wako achangodarika njanji “Zvinodhura Mwari wangu”???
Ndinoda mimhanzi yako Hakozi yaro saka akakodzera!! Mwari vakukomborere!! Ramba wakadaro rakanaka!!
Jay • Nyamavhuvhu 22, 2013 pa 8:31 pm • pindura
Rangarirai VaKristu pokugara ndakakuudzai vakomana pamusoro? Vanoda kubatsirwa.. Chero rubatsiro kwaizova vakomana huru. Mwari achapa asi kunyange Jesu aisagona kuita mabasa apo pakanga pasina kutenda. Munhu wose LA ari vasafuratire nemhaka yokushayiwa kwavo kutenda. Anorega kutsigira umambo uye kupa zvatinogona. Havaiti mumhanzi uye Mweya chaizvoizvo akataura mashoko avo. Anorega kupararira kuti zvakanaka! Tinoita izvi nokuti umambo y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Anorega kubatsira hama. Ndinokudai mese.
Jessica • Nyamavhuvhu 26, 2013 pa 9:36 pm • pindura
Awesome Blog mazvita Ishe kumutsiura ini Via ichi Blog, Ndinofanira kutanga braggin Ishe wangu Hallelujaah! :-)
ikaruma • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 12:39 ndiri • pindura
Chaizvoizvo kuda basa rauri kuita. kukomborerwa nenzira huru kuburikidza noushumiri hwako
Taurai: Trip Lee • Akavaka kuzvikudza Pt. 2
Taurai: Trip Lee • Vanovhaira Wallpaper
Terence • Kubvumbi 9, 2014 pa 2:11 pm • pindura
simba! Makaputsanya ichi pasi muumwe. uchenjeri zvikuru kuti jaya. Ndiri kunyengetera uye iwe nemhuri yako. zvipo zvenyu ndichakuita nzvimbo iwe. Chete kuti chii Mwari akadana uite, une Oil, Mweya wake Mutsvene. Rugare uye kubudirira kwamuri (Shilom)!